Marina Manelingelina Momba Ny Mossad Ao Israely · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2015 1:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, বাংলা, Italiano, English
Pikantsary avy amin'ny lahatsarim-panentanan'ny Al Jazeera momba ny ‘Telegramam-pitsikilovana‘
Vokatry ny fiarahamiasa amin'ny gazety The Guardian, namoaka antontan-taratasim-pitsikilovana, antsoina hoe ‘Spy Cables (Telegramam-pitsikilovana)‘ avy amin'ireo sampana misandrahaka manerantany, hatrany Israely ka hatrany Britaina, mandalo Rosia, Aostralia ary Afrika Atsimo ny Al Jazeera. Fantatra izany efa-taona taorian'ny namoahan'i Al Jazeera ny Palestine Papers (Antontan-taratasy Palestina)“, naoty , mailaka, sarintany sy zavatra hafa sarobidy mihoatra ny 1600, izay nandrakitra ireo fifanarahana am-polo taona mahery teo amin'i Isiraely sy ny Palestiniana.” Amin'ny ampamoaka amin'izao fotoana izao, hifantoka amin'ireo telegrama mifandraika amin'ny sampan-draharaha Mossad ao Israely isika.
Nanohitra ny lazain'i Netanyahu momba ny fandaharan'asa nokleary ao Iran ny Mossad
Tamin'ny 2012, nankany Etazonia ny Praiminisitra Isiraeliana Benjamin Netanyahu izay voalaza fa hampitandrina izao tontolo izao mikasika ny fandaharan'asa nokleary ao Iran, nilazany fa eo amin'ny faha-70 isanjato amin'ny fanatrarana ny tanjona izy ireo. Nandritra izany fotoana izany, nandà izany tantara izany ny sampam-pitsikilovany ao Israely antsoina hoe Mossad ka manoratra fa tsy “miezaka mankany amin'ny famokarana fitaovam-piadiana” i Iran. Ato ny Tantara Feno.
Nampiasaina ho “lohalaharana” amin'ny fitsikilovana ny zotram-piaramanidin'i Isiraely
Ity ampamoaka ity kosa dia nanambara fa “mampiasa ny mpitondra ny sainam-pireneny El Al Airlines i Isiraely, ho fanakonana ireo sampam-pitsikilovany,” filazana nohamafisin'ny antontan-taratasy avy amin'ny sampam-piitsikilovan'i Afrika Atsimo, ny SSA, nivoaka tamin'ny 2009. Ato ny tantara feno.
Nandrahona hanao fanafihana antserasera ao Afrika Atsimo ny “mpitsikilo Israeliana teo aloha”
Nanambara kosa ity ampamoaka ity fa vondrona milaza ny tenany ho mpitsikilo Israeliana teo aloha no nandrahona hanatontosa fanafihana antserasera ‘mandravarava’ ao Afrika Atsimo raha tsy manasazy ny hetsika local Boycott, Divest and Sanction (Fanoherana ao an-toerana, Fialàna sy Fanasaziana) manohitra ny fanitsakitsahan'i Israely ny lalàna iraisampirenena ny governemanta. Ato ny tantara feno.
Nangataka antsipiriham-baovao momba an'i Morsi ao Ejypta tamin'ny Sampam-pitsikilovan'i AFrika Atsimo ny Mossad
Namoaka ity telegrama ity nangataka tamin'ny SSA ao Afrika Atsimo mba hanome antsipiriham-baovao momba an'i Mohammed Morsi teo amin'ny iray volana nitondrany ny Mossad. Eto ny tantara feno sy Fanadihadiana avy amin'ny Al Jazeera.
Mpitsikilon'ny CIA “kivy” tsy nahavita nifandray tamin'i Hamas, nandresy lahatra an'i Afrika Atsimo i Isiraely mba hampangina ny fanadihadiana tohanan'ny Firenena Mikambana mikasika ny heloka bevava an'ady niseho tao Gaza.
Mamoaka indray ity vaovao tafaporitsaka ity fa niezaka fatratra ny hifandray tamin'ny Hamas ny mpiasan'ny CIA iray ary nangataka fanampiana tamin'ny SSA. Nivoaka ihany koa fa “nitady fanampiana tamin'i Pretoria amin'ny fiezahany hampihitsoka ny fanadihadiana tarihin'ny Firenena Mikambana mikasika ny heloka bevava an'ady tao Gaza, notarihan'ilay mpitsara Afrikana Tatsimo, Richard Goldstone ny lehiben'ny Mossad , Meir Dagan”.Tantara feno.
Namoaka ny paikadin'ny Mossad ny Telegrama Mpitsikilo
Namoaka ireo paikady sasany fampiasan'ny Mossad amin'ny asany i Will Jordan avy ao amin'ny Al Jazeera. Eto ny tantara feno